NOTE3LTE (N9005) Root ရပြီးမြန်မာစာမရဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက် … Another Method : Myanmar Mobile Software Developer
NOTE3LTE (N9005) Root ရပြီးမြန်မာစာမရဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက် … Another Method
October 16, 2013 | 20 Replies
ဒါကတော့ Note3 LTE ကို ROOT နည်းနောက်တမျိုးပါ … မြန်မာစာပါမှန်တဲ့နည်းပေါ့
တွေ့ရှိထားသူတွေက KO SI Thu & KO Myo တို့နှစ်ယောက်ပါ … ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
တယောက်နဲ့တယောက်ပြုလုပ်ပုံပြုလုပ်နည်းမတူကြပါဘူး … ကယ်စီယမ်ကွေကာကိုကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်သောက်သုံးကြသလိုပေါ့ N9005 ကို မြန်မာစာဖောင့်ထည့်တာ တော်တော်တိုင်ပတ်သွားတယ်ဗျာ..
Root လို့ ရပေမယ့် Font ကျတော့ထည့်လို့ မရဘူး..Font Changer တွေလည်းအစုံစမ်းကြည့်တာ တစ်ခုမှအဆင်မပြေဘူး..
အဲ့ဒါနဲ့KO MYO ကိုမေးကြည့်တော့ သူပေးတဲ့ Link နဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားတယ်ဗျာ..
အားလုံးလည်းသိအောင်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..လုပ်ရမှာကတော့ Custom Recovery တင်ပြီး
Recovery ကနေ Rooted Firmware ကို Flash ပေးရမှာပါ..လိုအပ်တဲ့ Software တွေကို Down လိုက်ပါ..
Custom Recovery ကို ဒီမှာ Down ပါ..
Odin ကို ဒီမှာ Down ပါ..
Recovery ကနေ Flash ရမယ့် Rooted Firmware ကို ဒီမှာ Down ပါ..
PRE ROOT DOWNLOAD HERE
( Odin နဲ့ တင်လို့ ရတဲ့ Firmware ရှိပေမယ့် Link က Access Denied ဖြစ်နေတယ်..)
လိုတာလေးတွေ Down ပြီးရင် ဖုန်းကို ပိတ်ပြီး Download Mode ၀င်လိုက်ပါ..
Vol – Home Power ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါစာတန်းတွေပေါ်လာရင် Vol + ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Download Mode ၀င်သွားပါလိမ့်မယ်..
Odin ကိုဖွင့်လိုက်ပါ..AP ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးမှာ Note3N9005 For CWM by KO SI THU.tar file လေးကိုထည့်လိုက်ပါ..
Download Mode ၀င်ထားတဲ့ ဖုန်းကို Computer နဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ..Odin မှာ ဖုန်းကိုသိသွားတာနဲ့ ..Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
သူ့ ဟာသူ တင်စရာရှိတာ တင်နေပြီးရင် Phone က Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်..
Rooted Firmware ကို SD card ထဲထည့်ပါ..SD card ကို Phone ထဲပြန်ထည့်ပါ..
Phone ကို Power ပိတ်ပြီး Recovery Mode ၀င်ပါမယ်..Vol + Home Power စုံနှိပ်ထားလိုက်ရင် Recovery Mode ထဲဝင်သွားပါမယ်.
Choose zip form sd card ထဲကနေ Rooted firmware ကိုရွေးပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ..
ကျွန်တော်လုပ်တုန်းကတော့ ငါးမိနစ်ဝန်းကျင်လောက်ပါပဲ.. ပြီးတာနဲ့Phone Reboot ကျပြီး
Root ပြီးသား Firmware လေးတက်လာရင် ကြိုက်တဲ့ Font Changer ထည့်သုံးလိုက်တာနဲ့ 
CREDIT TO KO Myo & KO SI Thu
THANK YOU FOR WATCHING MY POST!!!
Category: Android Tutorial, Root လုပ်နည်းများ
michaelsanay says: October 16, 2013 at 3:17 pm ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်ဗျာ သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ဖုန်းက note3 ပါ မြန်မာ font မရလို့ တိုင်ပတ်နေတာ အခုတော့ စမ်းလို့ရပြီ thank u so much brother’s
Reply waiyan says: December 13, 2013 at 7:48 pm thank bro, everythin is ok
Reply့ ဟိန်းစိုး says: October 16, 2013 at 8:25 pm အဲဒီအတိုင်းလုပ်တာ မ၇ဘူးဖြစ်နေတယ် ကူညီပါအုံး…font changer ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ သိချင်ပါတယ်…ဇော်ဂျီကို ပြောတာပဲလား တစ်ခြား font လား…အဆင်ပြေမယ်ဆို၇င်ဖုန်းခေါ်ပီးတော့ ပြောပြစေချင်ပါတယ်…+၆၅၉၃၃၇၉၇၃၈
Reply wa than says: October 22, 2013 at 2:05 pm ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို နောက်ထက်လည်းဒီထက်မကတင်နိုင်ပါစေ အကိုကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ရသွားပြီ ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကို
Reply Aungkoe says: October 24, 2013 at 4:43 pm အကိုရေ Note3firmware လေးလိုချင်ပါတယ်အဆင်ပြေရင်တင်ပေးပါလားဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်….
Reply khin Mg Htwe says: October 26, 2013 at 10:34 pm OPSSON-IVO 6600 Version-4.2.2 ပါ Root ကျပေမယ့်ဘယ် Changer နဲ့ မှ မြန်မာစာအဆင်မပြေလို့ ပါ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါလား ဘယ်စာလုံးမှ ရေးလို့ မရလို့ ပါ ဘာမှကိုမပေါ်တာပါ
Reply Aung Kyaw Hein says: October 27, 2013 at 10:42 am အခု share ပေးလိုက်တာ root ဖောက်တဲ့နည်းလို့ ထင်ပါတယ်။ အရင် Note1, Model 7000 တုန်းက root ဖောက်ပြီး သုံးခဲ့ဘူးတယ်။ Myanmar font နဲ့ အခြား application တွေ ထည့်သုံးတဲ့အပိုင်းမှာ အဆင်ပြေပေမယ့် နောက်ပိုင်း ဖုန်းဟန်းတာတို့၊ လေးသွားတာတို့၊ ဘက်ထရီကြာကြာမခံတာတို့ ဖြစ်လာတယ်။ error များလာတယ်ဆိုပါတော့။ root ဖောက်လို့ ဖြစ်တာလို့ ထင်မိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျမှ root မဖောက်ဘဲ Myanmar font ထည့်လို့ ရသွားပြီးလို့ တချို့ဆိုင်တွေက ပြောလာတယ်။ ကိုယ်က လက်လွန်သွားပြီ။ အခု Note3, Model 9005 ကို root မဖောက်ဘဲနဲ့ Myanmar font ထည့်လို့ ရတဲ့နည်းရော ရှိပါလား။ လောလောဆယ် ကျနော် S’pore က၀ယ်လာတဲ့ Note3, Model 9005 ကို root မဖောက်ရဲသေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။ facebook တို့၊ မြန်မာ website သတင်းတို့ကိုတော့ 1st Myanmar browser ထဲကနေ ၀င်ကြည့်နေတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ စာတော့ ရိုက်လို့မရသေးဘူးပေါ့။ root မဖောက်ဘဲ၊ တနည်းအားဖြင့် original firmware / OS ကို ဘာမှ မထိခိုက်စေဘဲ Myanmar font သွင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းရှိရင် share ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
Reply AungThura says: November 5, 2013 at 10:29 pm can be use Ifont and Zawgyiflip font .. if u have problem add my number +82 10 4746 2175 and call me with Viber Myanmar local time 5:45 pm ~ 9:00pm Monday to Friday..i can help u..currently i use Note3 korea version
Reply Than Swe says: February 27, 2014 at 6:53 pm http://www.aungkyaw.net/2014/01/samsung-galaxy-note-3-sm-n900-root.html
Reply nyanyelinn says: November 3, 2013 at 2:40 pm rooted firmware က down လို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်
Reply Aung Thu says: November 6, 2013 at 2:07 pm Note 10.1 2014 edition မှာ မြန်မာစာမရဘူး အကို။ Root တော့ရတယ်။ Font installer အားလုံးနဲ့ စမ်းပြီးပြီ။ Smart Zawgyi3installer နဲ့ လည်းစမ်းပြီးပြီ မရဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply Alien says: November 7, 2013 at 4:22 pm how about Galaxy S4?
Reply Tunsg says: November 12, 2013 at 9:25 pm အကို တို့ ခင်ဗျာ Note3နဲ့ ပက်သက်လို့ ကျွန်တော်တစ်ခုလောက် Share ချင်လို့ပါ အထက်ကအကိုတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုတာ Odin ၀င်တာရယ် PDA (PA) ၀င်တာမှားပြီးCWM ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် ကျွန်တော် ရိုးရိုး Root ဖောက်တယ် မြန်မာစာထည့်တယ်အဆင်မပြေဘူး အဲတာနဲ့ ကျွန်တော် င်္ Firmware ပြန်တင်လိုက်ပြီး အလွယ်ဆုံး Font Charger တစ်ခုခု ကို သုံးလိုက်တာ အဆင်ပြေတယ် သေချာအောင် ကျွန်တော် ၃/၄ ကြိမ်လောက်လုပ်ကြည့်တယ် Firmware ကိုလည်း ဒီဆိုက်က အကိုပေးတဲ့ Link မှာပဲ Down လိုက်တာပါ myanmarmobilesoftwaredeveloper အမြဲအောင်မြင်ပါစေအကို
Reply aung aung says: November 19, 2013 at 6:27 pm S4 i9505 4.3 rooted လေးအတွက်လည်း မြန်မာစာ ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ ပြောပြ ပေးပါဦးbro..တိုင်ပတ်နေတယ်
Reply JJ says: January 1, 2014 at 9:11 pm Yep, me too, please help. Rooted S4 i9505 4.3. Can see myanmar font on defult browser & chrome. But myanmar font not appear on phone system (Viber, Facebook, Msg, contact, etc..).
Reply sai kaung myat san says: November 24, 2013 at 1:02 pm Note3SM-N900 root လုပ်နည်းလည်း တင်ပေးပါဦး အကို…… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply Yamato says: November 30, 2013 at 10:29 am Where can I get that LTE version in Yangon??
Reply အောင်အောင် says: December 11, 2013 at 5:53 pm အကို တို့စမ်းဘူးလားဗျာ Error ရောရှိလာဗျား အားလုံးအဆင်ပြေတယ်မယ်လား အကို
Reply Ruriko says: December 16, 2013 at 11:06 am Dear Bros ,
Do u have any other methods than root or update new firmware of Note3 SM9005 ??I have already tried out Ifont+ Zaw Gyifont Method too , but it doesnt work. I would like to install Myanmar font without rooting or updating firware. Please show me some Guide too. Thank you .
Reply Than Swe says: February 25, 2014 at 11:29 am ဂျပန်မှာထွက်တဲ့ model နံပါတ်က တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူဘူးဖြစ်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မြန်မာစာသွင်းလို့ရနိုင်မလဲ ဒါမှမဟုတ် root လုပ်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ